नेपालमा यस्तो क्वारेन्टाइन पनि छ , जहाँ हुन्छ लाइभ कन्सर्ट ! – Jagaran Nepal
नेपालमा यस्तो क्वारेन्टाइन पनि छ , जहाँ हुन्छ लाइभ कन्सर्ट !
क्वारेन्टाइनमा बस्दा सावधानी अपनाएर खाने-बस्ने सुविधा पाउन निकै जरुरी हुन्छ। यस्तो बेला शारीरिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्न महत्वपूर्ण छ नै, मानसिक स्वास्थ्य बारे पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। सुर्खेतका केही युवाले यही कुरा मध्यनजर गर्दै क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूका लागि लाइभ कन्सर्ट गरिरहेका छन्। सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा त्यहाँका स्थानीय सांगीतिक ब्यान्डका युवाले यो काम गर्दै आएका हुन्।
‘द ब्लुम्स ब्यान्ड र ‘जेपर ब्यान्ड नामक दुई स्थानीय ब्यान्डको सहकार्यमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरूलाई लाइभ सांगीतिक मनोरञ्जन दिइरहेका छन्। ‘क्वारेन्टाइन बस्नु भएका बारे बाहिर नकरात्मक भावना फैलिन थालेको थियो। जसका कारण उहाँहरू तनावग्रस्त हुनुभएको थियो, ‘द ब्लुम्स ब्यान्डका सदस्य सुरज विश्वकर्मा भन्छन्, ‘बाहिरी मानिस क्वारेन्टाइन क्षेत्र वरिपरि जान डराउँथे। त्यसले भित्र रहनुभएका बीच मानसिक असर पर्न सक्ने डर भएको थियो। हामीले केबल आफ्नो ठाउँबाट उहाँहरूको स्वास्थ्यका लागि गर्न सक्ने सहयोग पुर्‍याएका हौं।’
सुरजका अनुसार यो कन्सर्ट क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई ‘म्यूजिक थेरापी दिने उद्देश्यले गरिएको हो। पाँच दिन यतादेखि उनीहरूले सुर्खेतका विभिन्न क्वारेन्टाइन क्षेत्रमा गएर गीत गाइरहेका छन्। यसले त्यहाँ बस्नेलाई आफ्नो भित्री तनाव भुलाउन सहज भएको उनको भनाइ छ।
सुरजसँगै ब्यान्डका अन्य सदस्य पहिल्यैदेखि संगीतमा आबद्ध थिए। संगीत बाहेक सबै जना आ-आफ्नो पेशागत क्षेत्रमा व्यस्त हुन्छन्। सुरज आफैं सुर्खेतको एक स्थानीय विद्यालयमा शिक्षक हुन्। अहिले लकडाउनका कारण सबै पठनपाठन बन्द भएको र उनीसँगै सबै साथी फुर्सदिला भएकाले यो काम गर्न अघि सरेको उनले बताए।